Abenzi beemitha ezingama-China abavelisi be-Meter Power Statistics Digital Wifi Smart Plug 16A UK Plug Mini abenzi nabathengisi | IQHAZA
Isiqinisekiso I-CE / FCC / iROSH
Inombolo yomzekelo I-SNW-227
I-WiFi ye-Smart Smart yePlagi
Imisebenzi yeplagi smart
* Ukulawula kude kude nosetyenziso lwe-meross
Imiyalelo yelizwi yokulawula emva kokuhambelana neAmazon Alexa kunye noMncedisi kaGoogle. MUSA ukuxhasa i-Apple HomeKit.
* Yenza iishedyuli zokucima / ukucima kunye nexesha lesixhobo sakho.
* IFTTT Iyahambelana
* Isebenza ngeMediatek Iot chipset ebonelela ngeChipset yesithethi esikrelekrele seAmazon Echo. Yenza ukuba ibe nakho ukufikelela kuluhlu olude lweWiFi kunye nenqanaba lokuqhawula elisezantsi kuninzi lwabakhuphisana nabo.
Isebenza kunye neAmazon Alexa, uMncedisi kaGoogle kunye neeSmartThings. Ungayilawula ngokulula ngemiyalelo yelizwi. "Alexa, vula umatshini wokuhlamba". Nceda uskrolele ezantsi kwaye ujonge kwi "Isikhokelo soBuchwephesha-Isikhokelo somsebenzisi" ukubona indlela emitsha yokumisela. MUSA ukuxhasa i-Apple HomeKit.
Uyilo lwecompact luhlala kuphela kwisokethi kwaye aluphazamisi ezinye iziseko.
Akukho Hub ifunekayo
Iplagi efanelekileyo ye-Meross ine-module ye-WiFi eyakhelweyo. Ingasebenza kunye ne-Wi-Fi yasekhaya esele ikho (i-2.4 GHz band) ngaphandle kwesidingo sehabhu eyahlukileyo.
Ishedyuli kunye nokuCwangciswa kweMiboniso
Cwangcisa / ucime iishedyuli ukuphuma kwelanga / ukutshona kwelanga / ixesha lewotshi. Lawula isixhobo sakho esikude ngokude nangokukhululekileyo. Yenza umboniso owufunayo ngonqakrazo olulula lweqhosha kuzo zonke iimveliso ezifanelekileyo.
Iphepha lePayipi elilahla ilangatye. Ukuxhotyiswa ngezindlu ezigcina umlilo kunye nokukhuselwa komthwalo omninzi.
Ulawulo lwe-Wireless Remote
Vula i-elektroniki uyicime / uyicime naphi na kwi-smart phone yakho nge-Meross app (i-iOS kunye ne-Android). Jonga ukuze ubone ubungakanani bezixhobo eziqhagamshelwe naphi na.
Egqithileyo Ixabiso leFektri yoMvelisi loMthengisi oMhlophe wePlagi yeWifi 16A
Okulandelayo: Umzi-mveliso oPhezulu oPhezulu oPhezulu oPhezulu weKhaya loLawulo lweMbane esiSebenzisa iPlagi yeWifi UK
Quality High Ihowuliseyili Custom Lixabiso US UK EU AU ...
Ixabiso eliliFektri eliXabiso ngeXabiso lePlagi yamandla e-USB
Umgangatho olungileyo weFektri ngokuthe ngqo kwi-5V 6.5A ene-4usb ...
Ukuthengiswa okuTshisayo kweFektri ngqo, 5V 3.1A / 2 iadaptha ye-USB ...
Umgangatho oPhezulu we-Wholesale Custom Cheap 3 USB + 1 TYP ...
Umgangatho oPhezulu we-Wholesale Wholesale Cheap US, UK, EU, ...